५५ प्रतिशत कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको छ भन्ने विज्ञले दिएको यस्तो तथ्यबाट दुनियाँ चकित ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/५५ प्रतिशत कोरोना भाइरस पादबाट सरिरहेको छ भन्ने विज्ञले दिएको यस्तो तथ्यबाट दुनियाँ चकित !
सन् २००१ मा, अष्ट्रेलियाली डाक्टर कार्ल क्रुस्लेन्की र सूक्ष्म जीववैज्ञानीक ल्यूक टेनेन्टले एक प्रयोग गरी पादले रोग सार्न सक्छ कि भनेर पत्ता लगाएका थिए । डा. टेन्नेन्टले एक साथीलाई दुई सेन्टिमीटरको दूरीबाट सिधा भाँडामा पाद्न भन्यो । यस्मा पहिले पाइन्ट लगाएर अनी त्यसपछि नलगाएर पाद्न लगाइएको थियो ।
तिनीहरूले फेला पारे कि पहिलो पेट्री डिश सफा नै रह्यो, जबकि दोस्रोलाई ब्याक्टेरियाहरू रातभरि अंकुरित रहेको देखियो । तर परीक्षणमा पाइएका ब्याक्टेरिया हानिकारक थिएनन् । यस वर्षको सुरूमा, चीनको रोग नियन्त्रण एवं रोकथाम केन्द्रले घोषणा गर्‍यो कि प्यान्ट कोरोनोभाइरस बोक्ने मुसा विरुद्ध प्रभावकारी अवरोध हुनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य निकायले यदि प्यान्टहरू लगाउँदछ भने कि मुसाले भाइरस सार्न असम्भव छ भनेका थिए । यद्यपि उनीहरुले चेतावनी दिए कि यदि संक्रमित बिरामीले पाइन्ट लगाउँदैन भने, उनीहरूले ठूलो मात्रामा पाद छोडे अनी त्यो पादलाई कसैले सुगन्धित गरे भने जोखिममा पर्न सक्छन् ।
यस महिनाको शुरूमा, वैज्ञानिकहरूले मानिसहरूलाई फ्लश गर्नु अघि शौचालय बन्द गर्न आग्रह गरे किनभने उनीहरू भन्छन् कि ‘एरोसोलिज्ड पू’ मार्फत कोरोनोभाइरोस फैलिन सक्छ । एउटा अध्ययनले भन्छ कि ‘शौचालय प्लम’ को कारणले दिसा र पिसाबलाई शौचालयबाट हावामा धकेल्न र अन्य सतहहरूमा फैलाउन सक्छ ।
स्वास्थ्य विज्ञहरू भन्छन कि कुनै पनि प्रकारको कोरोनोभाइरस रोक्न उत्तम तरिका राम्रो सरसफाइ नै उत्तम तरिका हो । तपाईको संक्रमणको जोखिम कम गर्न तपाईले आफ्नो हात साबुन र पानीले प्रायः २० सेकेन्डसम्म धुनु पर्छ, तपाईको आँखा, नाक र मुखलाई अनावश्यक रुपमा हातले छुनु हुँदैन र बिरामी मानिसहरूसँग सम्पर्क गर्दा माक्स, पीपीई लगाउँनुपर्छ ।
यदि तपाईलाई चिसो कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणहरू छन् भने, तपाईं अरूलाई बचाउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र बिरामी हुँदा घर भित्र रहँदा अरूसँग हुने अनावश्यक सम्पर्कबाट बच्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्नो मुख र नाकलाई टिशूले कभर गर्नुपर्दछ । जब तपाईं खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्नुहुन्छ । त्यो बेला प्रयोगपछि उक्त टिशुलाई टाढा फाल्नुहोस् र आफ्नो हात राम्रोसँग धुनुहोस् । तपाईंले छुनु भएको वस्तुहरू र सतहहरू सफा र डिसइन्फेक्टिंग पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । thesun.co.uk